प्रदर्शनको १७ औं दिनमा ‘छ माया छपक्कै’, अहिलेसम्मको व्यापार कति ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रदर्शनको १७ औं दिनमा ‘छ माया छपक्कै’, अहिलेसम्मको व्यापार कति ?
कात्तिक १४ गते, २०७६ - १२:४७
काठमाडौं । कलाकार दिपक राज गिरी र दिपाश्री निरौलाको ‘छ माया छपक्कै’ले बक्स अफिसमा बम्परको व्यापार गरेको छ । दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्मले प्रदर्शनको १७ दिनमै १२ करोडको व्यापार गरेको निर्माता रोहित अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
दशैं र तिहारको बिचबाट प्रदर्शनमा आएको ‘छ माया छपक्कै’ले गरेको १२ करोडको व्यापार बक्स अफिसमा निकै उच्च हो । यदि बक्स अफिसमा फिल्मको व्यापार यही रफ्तारमा गएमा दिपक र दिपाको छ माया छपक्कैले ‘छक्का पञ्जा’ को व्यापारलाई भेट्न सक्ने आँकलन फिल्म वृत्तमा छ ।
फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ मा दिपकराज गिरी, केकी अधिकारी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, सुपुष्पा भट्ट लगायत दर्जन बढी हाँस्य व्यांग्य कलाकारहरुको अभिनय छ । निर्देशक दिपाश्री निरौला फिल्ममा निर्देशन सहयोगीको रुपमा आवद्ध छिन् ।
कात्तिक १४ गते, २०७६ - १२:४७ मा प्रकाशित